Home Wararka Waa maxay ujeedada uu Al-Cadaala u hurinayo dagaalka isagoo ku hadlaya magaca...
Waa maxay ujeedada uu Al-Cadaala u hurinayo dagaalka isagoo ku hadlaya magaca Rooble?
Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Caddaala ayaa asbuucii u danbeeyay waxa uu ka hadlayay warbaahinta kala duwan isaga oo u muuqda in uu hurinayo dagaalka siyaasadeed ee u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble.
Qorshahaan lagu hurinayo dagaalka siyaasadeed ayaa waxa uu ka socdaa xafiiska Rooble? Waxaa dad badan isweydiinayaa waa maxay ujeedada dagaalka noocaan ah oo uu gadaal ka riixayo RW Rooble? Ma waxa ujeedadiisu tahay in doorashada dib u dhacdo? Ma uu Rooble doonayaa in dagaal qabiil ka qarxo magaalada Muqdisho? Waxa maxay danta Rooble ka yeelan karo in xaalada lagu jiro lagu sii miro?
Wareeysigii ugu danbeey ee uu Al Cadaala siiyay telefishanka Universal ayuu markale ku celiyay in uu walwal ka qabo in Farmaajo soo weeraro Rooble.
Waxa uu intaas ku daray “Runtii gacantii shalay ku fikirtay inay soo weerarto Ra’iisul wasaaraha oo ciidanka qalabka sida u isticmaasho danaheeda inta gacantaas ay awood uleedahay inay waxaas sameyso meesha lagama saari karo inay khatar jirto.”
Waxaa nasiib xumo ah in la qabiileeyo xaalada cakiran ee uu dalka ku jiro! Iyada oo ay jiraan wasiiro iyo mas’uuliyiin kale oo ay mas’uuliyadoodu tahay in ay ka hadlaan arintaaa ayaa waxaa si qabiili ah ugu hadlayo Ra’iisal Wasaaraha ninkaan Al Cadaala oo ay isku hayb yihiin? meeday wasiiradii kale, agaasimayashii? Ma aha xiligaan mid dadka lagu kiciyo caadifad qabiil.
Previous articleM M. oo ay ku qaadatay 3 maalin inay isku raacaan teegeerida cenyrinta Madera
Next articleCoroner’s verdict that tragic Somali refugee Shukri Abdi, 12, drowned by accident was ‘flawed’, say family
Madaxweyne Deni oo la kulmay Saraakiisha Ciidamada